Ọrụ Ndịozi 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 19:1-41
19 Ka oge na-aga, mgbe Apọlọs+ nọ na Kọrịnt, Pọl gara n’akụkụ ime ime obodo wee gbadata Efesọs,+ wee hụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs; 2 o wee sị ha: “Ùnu natara mmụọ nsọ+ mgbe unu ghọrọ ndị kwere ekwe?” Ha wee sị ya: “Anyị anụtụbeghị na e nwere mmụọ nsọ.”+ 3 O wee sị: “Oleezi ụdị baptizim e mere unu?” Ha wee sị: “Ọ bụ baptizim Jọn.”+ 4 Pọl wee sị: “Jọn mere baptizim, bụ́ baptizim na-egosi nchegharị,+ na-agwa ndị Juu ka ha kwere n’onye ahụ nke na-abịa n’azụ ya,+ ya bụ, Jizọs.” 5 Mgbe ha nụrụ nke a, e mere ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs.+ 6 Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka n’isi,+ mmụọ nsọ dakwasịrị ha, ha wee malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche na ibu amụma.+ 7 Ha niile dị ihe dị ka ndị ikom iri na abụọ. 8 Ọ banyere n’ụlọ nzukọ,+ o wee na-ekwu okwu n’atụghị egwu ruo ọnwa atọ, na-agwa ndị mmadụ okwu banyere alaeze Chineke+ n’ụzọ na-eru n’obi. 9 Ma mgbe ụfọdụ ndị malitere ime ka obi ha kpọọ nkụ ma ghara ikwere,+ na-ekwu okwu ọjọọ banyere Ụzọ Ahụ+ n’ihu ìgwè mmadụ ahụ, o si n’ebe ha nọ pụọ.+ O mekwara ka ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs si n’ebe ha nọ pụọ.+ Ọ na-ekwukwa okwu kwa ụbọchị n’ụlọ mgbakọ nke dị n’ụlọ akwụkwọ Tiranọs. 10 Ihe a nọ na-eme ruo afọ abụọ,+ nke mere na ndị niile bi n’ógbè Eshia+ nụrụ okwu Onyenwe anyị, ma ndị Juu ma ndị Grik. 11 Chineke nọgidekwara na-arụ oké ọrụ dị ike site n’aka Pọl,+ 12 nke mere na a na-emetụ ndị ọrịa+ ọbụna ákwà ya na uwe eprọn ya, ọrịa ha na-ahapụkwa ha, ndị mmụọ ọjọọ na-apụtakwa.+ 13 Ma ụfọdụ ndị n’ime ndị Juu na-agagharị agagharị bụ́ ndị na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ+ gbalịkwara ịkpọ aha Onyenwe anyị Jizọs+ n’isi ndị nwere ajọ mmụọ, sị: “Eji m Jizọs onye Pọl na-ekwusa na-enyesi unu iwu ike.”+ 14 Ma ụmụ ndị ikom asaa nke otu onye a na-akpọ Siva, bụ́ onyeisi nchụàjà ndị Juu, na-eme ihe a. 15 Ma mmụọ ọjọọ ahụ zara ha, sị: “Amaara m Jizọs,+ amakwaara m Pọl;+ ma olee ndị unu bụ?” 16 Nwoke ahụ mmụọ ọjọọ nọ n’ime ya wee makwasị ha,+ jide ha n’otu n’otu, ma merie ha, nke mere na ha gba ọtọ buru ahụ́ ha merụsịrị gbapụ n’ụlọ ahụ. 17 Mmadụ niile wee mata nke a, ma ndị Juu ma ndị Grik bi n’Efesọs; egwu+ wee jide ha niile, e wee na-enye aha Onyenwe anyị Jizọs otuto.+ 18 Ọtụtụ ndị ghọworo ndị kwere ekwe na-abịa eme nkwupụta+ ma na-akọ n’ihu ọha ihe ndị ha na-eme. 19 N’ezie, ọtụtụ ndị na-eme anwansi+ chịkọtara akwụkwọ ha ma kpọọ ha ọkụ n’ihu mmadụ niile. Ha wee gbakọọ ọnụ ahịa ha wee hụ na o ruru puku mkpụrụ ego ọlaọcha iri ise. 20 Okwu Jehova wee si otú a na-agbasa ma na-enwe mmeri nke ukwuu.+ 21 Mgbe e mesịrị ihe ndị a, Pọl kpebiri n’ime mmụọ ya na ya gachaa Masedonia+ na Akeya, na ya ga-eje Jeruselem,+ ọ sịrị: “Mgbe m ruru ebe ahụ, m ga-agakwa Rom.”+ 22 Ya mere, o zipụrụ mmadụ abụọ n’ime ndị na-ejere ya ozi, ya bụ, Timoti+ na Erastọs,+ ka ha gaa Masedonia, ma ya onwe ya nọtụkwuru n’ógbè Eshia. 23 N’oge ahụ, e nwere ọgba aghara dị ukwuu+ megide Ụzọ Ahụ.+ 24 N’ihi na otu onye aha ya bụ Dimitriọs, onye na-eji ọlaọcha akpụ ihe, na-enwetara ndị omenkà uru dị ukwuu site n’ịrụ ụlọ arụsị Atemis ndị e ji ọlaọcha akpụ.+ 25 O wee kpọkọta ha, tinyere ndị na-arụ ụdị ọrụ+ ahụ, sị: “Unu maara nke ọma na ọ bụ ọrụ a na-eme ka anyị na-enwe ọganihu.+ 26 Unu hụkwara ma nụ otú Pọl a si mee ka ìgwè mmadụ dị ukwuu kweta, meekwa ka ha nwee echiche dị iche, ọ bụghị naanị n’Efesọs+ kama n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ógbè Eshia dum, na-asị na chi ndị e ji aka mee+ abụghị chi. 27 Ihe ize ndụ dị na ya abụghị naanị na ọrụ anyị agakwaghị enwe ùgwù, kamakwa, a ga-ewere ụlọ nsọ nke nnukwu chi nwaanyị bụ́ Atemis+ dị ka ihe efu, a na-agakwa ime ka ọbụna ịdị ebube ya, bụ́ nke ógbè Eshia na elu ụwa dum mmadụ bi na-efe ofufe, bụrụ ihe efu.” 28 Mgbe ha nụrụ ihe a, iwe juru ha obi, ha wee malite iti mkpu, sị: “Atemis nke ndị Efesọs dị ukwuu!” 29 Ya mere, obodo ahụ jupụtara n’ọgba aghara, ha jikwa otu obi gaa n’ebe a na-eme ihe ngosi, dọkpụrụ Geyọs na Arịstakọs+ gawa, bụ́ ndị Masedonia, ndị so Pọl na-ejegharị. 30 Ma Pọl chọrọ ịbakwuru ndị ahụ, ma ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs ekweghị ya. 31 Ọbụna ụfọdụ n’ime ndị isi ememme na egwuregwu, bụ́ ndị ha na ya dị ná mma, zigaara ya ozi ma malite ịrịọ ya ka ọ ghara itinye onwe ya n’ihe ize ndụ n’ebe ahụ a na-eme ihe ngosi. 32 Eziokwu bụ na ụfọdụ na-eti otu ihe ná mkpu, ndị ọzọ na-etikwa ihe ọzọ;+ n’ihi na nzukọ ahụ nọ n’ọgba aghara, ihe kakwa n’ọnụ ọgụgụ n’ime ha amaghị ihe mere ha ji gbakọta. 33 Ha wee jikọọ aka kpọpụta Alegzanda n’ìgwè mmadụ ahụ, ebe ndị Juu na-akwaga ya n’ihu; Alegzanda fekwara aka ma na-achọ ịzara ọnụ ya n’ihu ndị Juu. 34 Ma mgbe ha ghọtara na ọ bụ onye Juu, ha niile tiwere mkpu ruo ihe dị ka awa abụọ, sị: “Atemis nke ndị Efesọs dị ukwuu!”+ 35 N’ikpeazụ, mgbe onye nlekọta obodo mere ka ìgwè mmadụ ahụ nọrọ jụụ,+ ọ sịrị: “Ndị Efesọs, ọ̀ dị onye ọ bụla n’ime ihe a kpọrọ mmadụ nke na-amaghị na ọ bụ obodo ndị Efesọs na-elekọta ụlọ nsọ Atemis ukwu, na-elekọtakwa ihe oyiyi nke si n’eluigwe daa? 36 Ya mere, ebe ọ bụ na a pụghị ịgbagha ihe ndị a agbagha, o kwesịrị ekwesị ka unu nọrọ jụụ ma ghara ime ihe ọkụ ọkụ.+ 37 N’ihi na unu kpọtara ndị ikom a ndị na-abụghị ndị na-ezu ihe dị n’ụlọ nsọ ma ọ bụ ndị na-ekwulu chi nwaanyị anyị. 38 Ya mere, ọ bụrụ na Dimitriọs+ na ndị omenkà so ya nwere onye ha na ya sere okwu, e nwere ụbọchị a na-ekpe ikpe,+ e nwekwara ndị na-achị ógbè;+ ha weta ebubo ha na-ebo ibe ha. 39 Otú ọ dị, ọ bụrụ na unu na-achọ ihe karịrị nke ahụ, a ghaghị ikpebi ya ná nzukọ iwu kwadoro. 40 N’ihi na anyị nọ n’ihe ize ndụ nke ịbụ ndị e boro ebubo na ha na-emegide ọchịchị n’ihi ihe na-eme taa, ọ dịghị otu ihe merenụ nke ga-enye anyị ikike ikwu ihe kpatara e ji nwee ìgwè a na-akpa aghara.” 41 Mgbe o kwusịrị ihe ndị a,+ ọ sịrị ndị ahụ zukọtara lawa.+
Ọrụ Ndịozi 19